Nitsefotra ny fihaonambe mahefa teny amin’ny CCI: hidina an-dalambe sy nanome 72 ora ny mpitondra ireo kandidà | NewsMada
Nitsefotra ny fihaonambe mahefa teny amin’ny CCI: hidina an-dalambe sy nanome 72 ora ny mpitondra ireo kandidà
Tsy ho lasa lavitra. Namoaka fehinkevitra ny fihaonambe nambara fa mahefa (conférence souveraine). Eo ny nanomezana 72 ora ny Ceni sy ny HCC ary ny filoham-panjakana hanokatra indray ny lisi-pifidianana. Izany hoe, afaka telo andro. Dila izany, haka fanapahan-kevitra tsy mbola nambara izy ireo. Manampy izany, hampitsahatra ny propagandiny ireo kandidà 17 ireo. Hanentana ny vahoaka koa izy ireo hanara-dia amin’ny hetsika mety hataony. Mandra-piandry izany, hifamotoana etsy Mahamasina izy ireo, anio, miantso vahoaka ary hanatitra izany fitakiana izany eny amin’ny HCC Ambohidahy.
Tsy misy lanjany sy dikany akory…
Mazava izany izao fa fiketrehana fanakorontanana ny zotram-pifidianana izao hetsika tarihin’ny kandidà, ny amiraly Ratsiraka, izao. Efa mazava ny voalazan’ny lalàna ny amin’ny tsy fahazoana intsony mikitika izany lisi-pifidianana izany. Efa namaly ny momba io ny HCC. Etsy andaniny, tsy araka ny anarany ho fihaonambe mahefa ilay fihaonana fa filam-baniny tsotra izao ary tsy mahafeno ny fepetra amin’ny maha mpanapaka azy. Izany hoe, tsy tokony ho nanome fe-potoana ny mpitondra raha tena mahefa fa nampihatra avy hatrany ilay fehinkevitra tapaka. Tsy misy lanjany sy dikany eo anatrehan’ny lalàna sy ny raharaham-panjakana. Tsy mahatapaka koa satria tsy namaly ny fanasana ny andrimpanjakana na ireo mikarakara fifidianana. Raharahan’ny samy kandidà ihany ny fivoriana… Diso fanantenana izany ireo andian’olona voaasa teny Ivato.
Fiketrehana politika maloto eto amin’ny firenena
Ankoatra izany, tsy manova ny zotram-pifidianana ny tsy hanaovan’izy ireo intsony fampielezan-kevitra. Efa tsy nanao izany rahateo ny maro amin’izy ireo. Tsy miova koa ny biletà tokana satria tsy manala azy ireo amin’ny maha kandidà ny tsy fanaovany propagandy.
Midika ireo rehetra ireo fa fialana ilany fotsiny iny ambara fa fihaonambe mahefa iny. Fiketrehana politika maloto hatao eto amin’ny firenena ny ao ambadik’izany…